Mụta ịzụ ahịa | Free Forex n'ókè | Schoollọ ahịa azụmaahịa kacha mma n'ụwa
USD / CAD na-agbanwe n'etiti ọkwa 1.2500 na 1.2640, na-ere nrụgide nwere ike
Igodo Nguzogide Igodo: 1.4200, 1.4400, 1.4600Key Nkwado Ndị Isi: 1.3400, 1.3200, 1.3000 USD / CAD Ahịa Ogologo Ogologo Oge: BearishUSD / CAD ụzọ dị na mgbada. Ndị otu ahụ mere mkpirikpi oge ka ọ dị elu na 1.2600 na Machị 30. Maka izu gara aga, a kwụsịrị ịga n'ihu na elu na nso nso a. Na isi, ma ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa na-agbaji […]
Ethereum (ETH) Nyocha Ahịa: Ether na-aga n'ihu na Rally ka ọ na-emebi Nguzogide na $ 2,150 na $ 2,200
Key HighsEthereum ehi na-agbaji nguzogide na $ 2,150 na $ 2,200The nnukwu altcoin agbajiwo nguzogide na ọkwa $ 2,300 Ethereum ETH) Ọnụ ọgụgụ dị ugbu a: $ 2,349.68 $ 270,957,376,500, $ 30,816,542,480 Ethereum (ETH) Ọnụahịa nyocha Eprel 2,000, 2,200 Ndị na-azụ ahịa agbajirila $ 2,400 na $ 1,800 na-eguzogide dị ka Ether […]
Dollar US na-anọ n’adịghị ụkọ oge na British Pound
Dollar US nọgidere na-esighi ike ụnyaahụ, ọ bụ ezie na mkpụrụ na 10 afọ US jikọtara ntakịrị, uche ahịa ahụ tụgharịkwara na CPI maka March. Rịba ama na US CPI ibu na-atụ anya mee ngwangwa na March, na ọ bụrụ na nke ahụ mere, ọ nwere ike dịkwuo elu atụ anya nke n'ihu inflationary nsogbu na US aku na uba, nke […]
Bitcoin na-agbaji oge ọhụụ ọhụụ nke ndepụta Coinbase Nasdaq
Site na Coinbase setịpụrụ ịmalite aha ya na Nasdaq echi, ndị na-etinye ego nọ na nsọtụ oche ha maka ihe ha na-atụ anya na ọ ga-abụ nnukwu akara maka nnabata Bitcoin (BTC) na cryptocurrencies n'ozuzu. Ihe omume a ga-abụ oge izizi n’akụkọ ihe mere eme maka mgbanwe mgbanwe cryptocurrency dị ka […]
US Mgbidi Street 30
US Wall Street 30 (US30USD) Falls dị ka ọnụahịa na-erute Ọkwa Ndozi 34000
Mpaghara Nguzogide Igodo: 33000, 33500, 34000 Mpaghara Nkwado Ndị Isi: 26000, 25500, 25000 US Wall Street 30 (US30USD) Longdị ogologo oge: BullishUS30USD na-agaghachị mgbe ndekpọ ahụ nwalere larịị 34000 mpaghara nkwụsị. E wezụga nke ahụ, ndeksi ahụ na-ere ahịa na mpaghara achọrọ karịa nke ahịa. Ngwaọrụ Fibonacci egosila na enwere ike ịgbanwe na ọkwa a. Ka ọ dịgodị March 18 […]
croda na-ekere òkè
Zụta Croda maka ọrụ dị mkpa na ọgwụ mgbochi mvidNA Covid
Croda International (CRDA), ụlọ ọrụ kemịkal UK, na-ada ka ngwaahịa ụlọ ọrụ uzuzu uzuzu - ọ bụghị ihe na-atọ ụtọ mana ọ na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ. Ọfọn Croda na-akwụ ụgwọ n'ezie, ọ bụ ezie na mkpụrụ dị ala nke 1.7% na ego ọ na-enweta na-agbanwe agbanwe na nke a na-ahụ anya, ma na-aga n'ihu na-aga n'ihu maka […]
Ndị Isi Taxtụ Isi nke Spanish Na-enye Akwụkwọ Ozi ningdọ Aka ná Ntị nye Ndị Na-achụ Ego ptogụ Cryptocurrency
Gọọmentị Spain amalitela ịmanye iwu siri ike nke cryptocurrency, ebe ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụtụ isi mba abanyela n'ọrụ. Akụkọ na-egosi na Hacienda nyere akwụkwọ ozi ịdọ aka ná ntị 14,800 nye ụmụ amaala ndị dara ma ọ bụ ka ga-ekwupụta njide akụ ha. Thedọ aka ná ntị ahụ kwuru na ndị na-akwụ ụgwọ ga-enweta ihe karịrị 5,000 euro ($ 5,900). […]
USDkpụrụ USD / SGD Na-aga n'ihu!
USD / SGD gbadara ozugbo emepụtara data ọnụọgụ US mana ọ ka nwere ike ịlaghachi elu. A na-ere ya na 1.3419 n'oge edere mgbe ọ tụgharịrị isi ụbọchị nke 1.3414. A na-atụ anya mgbanwe ihu dị elu mgbe ọ gafesịrị isi akara ala. The ụzọ mepụtara a triangle na H4 nke […]
USDCHF kwụrụ ala ala n'akụkụ mpaghara 0.9200 n'etiti ọnụ ọgụgụ US
USDCHF Nyocha Ahịa - Eprel 13 Mgbe ọ daba na ụbọchị 5, ndị otu USDCHF gbadara ala na gburugburu 0.9200 n'isi mmalite nke nnọkọ European / American nke Tuesday. Boghaghachi azụ ahụ dị gburugburu 0.9259 dị elu na oge nke post a na-efegharị gburugburu ọkwa 0.9213. US dollar dị na ịkpachara anya mode […]
USDMXN bouncing site na ọkwa igodo akụkọ ihe mere eme
Nkwado Igodo: 20.00 Nguzogide Igodo: 20.55 - 20.90 -21.60 USDMXN anọwo na-agbasi ike nke ike karịa ihe karịrị otu ọnwa ebe ọ bụ na ọ laghachiri na March 8th. That´sa -7.35% gaa. Ọkwa a bụkwa 0.764 pullback nke ikpeazụ ogologo okwu bullish move. Ọzọkwa, nke ikpeazụ a 5 izu bearish aga […]